Robert Lewandowski Oo Durba Sheegay In Uu U Xiisay Saxiixa Cusub Ee Pierre-Emerick Aubameyang & Sababta Oo Uu Sharaxay – Kooxda.com
Home 2018 February Ingiriiska, Jarmalka, Wararka Maanta Robert Lewandowski Oo Durba Sheegay In Uu U Xiisay Saxiixa Cusub Ee Pierre-Emerick Aubameyang & Sababta Oo Uu Sharaxay
Robert Lewandowski Oo Durba Sheegay In Uu U Xiisay Saxiixa Cusub Ee Pierre-Emerick Aubameyang & Sababta Oo Uu Sharaxay
Weeraryahanka Bayern Munich Robert Lewandowski ayaa markii ugu horaysay ka hadlay ka tagitaankii weeraryahanka Pierre-Emerick Aubameyang ee horyaalka Germany kaas oo maalintii ugu dambaysay suuqa kala iibsiga ku biiray kooxda Arsenal.
Weeraryahanka reer Poland ayaa markii ugu qoraysay qirtay sida uu durba ugu xiisay Pierre-Emerick Aubameyang inkasta oo uu kaliya horyaalka Germany ka maqnaa todobaadyo.
Pierre-Emerick Aubameyang oo ah gool dhaliyihii horyaalka Germany ee xilli ciyaareedkii hore ayaa Arsenal ugaga soo biiray Borussia Dortmund isaga oo noqday xiddiga ugu qaalisan taariikhda suuqa kala iibsiga Gunners isaga oo ugu soo biiray 56 milyan.
Lewandowski Iyo Aubameyang ayaa wakhti ku soo qaatay kooxda BVB iyada oo uu inta badan Aubameyang ahaa xiddig badal u ahaa Lewandowski ka hor inta uuna ku biirin Bayern Munich sanadkii 2014.
Labada xiddig ayaa tan ilaa wakhtigaas ahaa xiddigaha isku baacsada gool dhalinta horyaalka Germany kadib markii uu Lewandowski ku biiray kooxda Bayern Munich.
“Saddexdii sano ee la soo dhaafay Waxa aan Pierre-Emerick Aubameyang kula tartamayay gool dhalinta horyaalka”ayuu yiri Lewandowski.
“Hadda oo uu baxo, malaha qayb ka mid ah dhiirrigelintii aan ka helayay tartankiisa ayaa tagtay”.
“Sida iska cad marka aad haysato cid kula tartanta waxa aad noqonaysaa mid ka dadaal badan sidii hore”.
Filed in: Ingiriiska, Jarmalka, Wararka Maanta